राजनीति Archives - नेपाल दृष्टि
संयुक्त लगानी विस्तारका लागि सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह
काठमाडौँ, ४ चैत ः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय उद्योग परिसंघको टोलीले आज शिष्टाचार भेट गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा र परिसंघका अध्यक्ष एवं अपोलो हस्पिटल इन्टरप्राइजेज लिमिटेडका कार्यकारी उपाध्यक्ष सोबना कामिनेनीको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल अब समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढेकाले नेपालमा भारतीय संयुक्त लगानी विस्तारका लागि सहयोग गर्न सिआइआईका अध्यक्षलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले मुलुकको समृद्धि नै आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पार्दै दुवै देशका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र भारतीय उद्योग परिसंघबाट नेपालमा भारतीय संयुक्त लगानी बढाउन नेतृत्वदायी भ
–रमेश लम्साल काठमाडौँ, ४ चैत ः दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुनुभएका नन्दबहादुर पुन नन्दकिशोर पुन ‘पासाङ’ को नामले परिचित हुनुहुन्छ । तत्कालीन नेकपा(माओवादी)ले सञ्चालन गरेको ‘जनयुद्ध’मा ‘पासाङ’को नामले परिचित पुन २०२२ कात्तिक ७ गते राङ्सी–९, रोल्पामा आमा स्व मनसरा पुन बुबा रामसुर पुनको माइलो सुपुत्रका रुपमा जन्मनु भएको हो । किसान परिवारका रामसुरलाई छोरा पढाउन निकै समस्या थियो । एकातिर धेरै सन्तान अर्कोतिर गाउँका ठालुले सम्पत्ति खोसिदिनु । त्यसका बाबजुद पनि सबै छोरालाई अध्ययन गराउनुभयो । प्युठान अड्डाबाट मुद्दा जितेर खोसिएका सम्पत्ति फिर्ता लिनुभयो । पाँचै भाइ छोरालाई रामसुरले त्यतिबेला आइएभन्दा माथिको अध्ययन गराउनुभयो । ८३ वर्षीय रामसुर अहिले पनि कृषि कर्ममा नै सक्रिय हुनुहुन्छ । पासाङको जेठा दाजु वीरबहादुर पुन इन्जिनियर, साइँला भाइ भीमप्रकाश पुन उच्च माध्यमिक विद्यालय प
काठमाडौँ- नेकपा(एमाले)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आगामी वैशाख ९ गते एकीकृत पार्टी घोषणा हुने जानकारी दिनुभएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको दिनमा नै नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले एकीकृत पार्टी एकताको घोषणा गर्ने तयारी गरेको उहाँले बताउनुभयो । एमाले धादिङ– काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले तीनै तहका जनप्रतिनिधिलाई सम्मान गर्न आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पार्टी एकता प्रक्रिया अगाडि बढेको र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको दिनमा नै एकताको घोषणा गर्ने तयारी गरिएको बताउनुभयो । आफूले लामो समयदेखि दुई पार्टीलाई मिलाउन अधिकतम् प्रयास गरेको र सफलताको दिशामा पु¥याएको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष गौतमले भन्नुभयो, “२०६३ सालदेखि मैले एकताको प्रयास गरेँ । अहिले आएर सफल भएको छु । यसलाई अझ सार्थक बनाएर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्य छ । त्यो लक्ष्यमा समेत सफलता हासि
डा.शिवमाया : प्रचण्डले राजदूत बन्न दिएनन्, ओलीले बनाए उपसभामुख
१ चैत, काठमाडौं । यदि ०७३ सालमा केपी ओलीको सरकार नढलेको भए डा.शिवमाया तुम्बाहम्फे अहिले इजरायलमा नेपाली राजदूतका रुपमा कुटनीतिक भूमिकामा भेटिने थिइन् । तत्कालीन सरकारले उनलाई इजरायलको लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । तर, संसदीय सुनुवाई हुन नपाउँदै प्रचण्ड नेतृत्वमा कांग्रेस माओवादी सरकार बनेपछि उनीसहित सबैको नाम फिर्ता भयो । ओलीको सिफारिसमा राजदूत हुन नपाएकी तुम्बाहाम्फेले ओलीकै एकल निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख बन्ने अवसर पाउँदैछिन् । उपसभामुखमा कांग्रेसबाट पुष्पा भुसालको उम्मेदवारी पारेको छ । तर, वाम गठबन्धन र मधेसवादी दलको समेत समर्थन पाउने भएकाले शिवमायाको जित निश्चित छ । को हुन् शिवमाया ? ०३५/३६ को विद्यार्थी आन्दोलनदेखि तत्कालीन नेकपा मालेआवद्ध अनेरास्ववियुबाट राजनीति थालेकी शिवमाया त्यो बेलाकी चर्चित क्रान्तिकारी हुन् । उनी विभिन्न कमिटी हुँदै रामनाथ ढकाल अध्यक्ष
२९ फागुन, काठमाडौं । संघीय सांसद मात्र होइन, प्रदेशसभाका संसदहरुले पनि लाइन लागेर राष्ट्रपतिलाई मत दिए । तर, त्यहाँ चुनावको रौनक थिएन । राष्ट्रपतिका उम्मेदवारले मतदातासँग मत मागेको दृश्य देख्न पाइएन । राष्ट्रपतिका लागि कांग्रेस उम्मदेवार कुमारी लक्ष्मी राई पूर्वसांसद हुन् । उनी मतदान स्थलमा देखिएकी थिइन् । तर, अर्का उम्मेदवार विद्यादेवी भण्डारीले मतदान स्थल पुगिन् न कसैसँग मलाइ मत दिनुस् भनेर मागिन् । उनी बहालवाला राष्ट्रपति हुन् । त्यसैले पनि उनलाई प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारलाई जस्तो मतदाता माझ जान सहज थिएन । त्योसँगै वाम गठबन्धनको प्रष्ट बहुमत छ, एमाले र माओवादीले मत हाल्न भनिसकेका छन्, त्यसैले उनले मत माग्नै परेन । अरुलाई के लाग्यो थाहा छैन ? तर, कांग्रेस सांसद गगन थापाले भने सार्वभौम मतदाताको अनुभव गर्न नपाएको बताएका छन् । ‘यसअघिका चुनावमा मत माग्दै आउनुहुन्थ्यो । हात जोड
२९ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएकी छन् । उनको नयाँ कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ । राष्ट्रपति चयनका लागि मंगलबार निर्वाचन भएको थियो । वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीसँगै कांग्रेसकी कुमारी लक्ष्मी राई चुनावी मैदानमा थिइन । निर्वाचक मण्डलमा संघीय संसदसँगै प्रदेशसभा सांसदहरु पनि मतदाता थिए । संघीय सांदको मतभार ७९ र प्रदेशसभा सांसदको मतभार ४८ तोकिएको थियो । वाम गठबन्धनकी उम्मेदवार भण्डारी दुई तिहाई बढी मतका साथ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी छन् । भण्डारीले ३९ हजार २७५ मत पाइन् । उनलाई २४५ संघीय सासद र ४१५ प्रदेशसभा सदस्यले मत दिएका थिए । कांग्रेस उम्मेदवार राईले भने ११७३० मत पाएकी छन् । उनलाई ७८ संघीय सांसद र ११६ प्रदेशसभा सदस्यले मत दिएका छन् । ८ सांसदको मत बदर निर्वाचनमा संघीय संसदका ३३१ र प्रदेशसभाका ५३६ सदस्य मतदाता गरेका छन् ।
२७ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई गुण र दोषका आधारमा समर्थन गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत मागेका थिए । उनले सत्ता-प्रतिपक्ष नभिनेर मिलेर जाने भन्दै कांग्रेससँग पनि मत मागेका किा छन् । तर, कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्ने बताएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले मिलेर देश बनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव सकारात्मक भएको बताए । तर, प्रतिपक्षविहीन संसद हुन नसक्ने भन्दै उनले भने, ‘सरकारलाई गुण र दोषका अधारमा सहयोग गर्छौं ।’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई मत दिन नसक्ने भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले सदनमा गरेको प्रतिवद्धता कति पुरा हुन्छ हेर्ने बताए । उनले भने, ‘१०० दिन हेर्छौं, प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका प्रतिवद्धता कति प्राप्त गर्नुहुन्छ हेर्छौ । वाच डकका रुपमा कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहन्छ । अनलाइनखबर
Mar112018 by Kamal SimtaliNo Comments
नेपालको अर्थतन्त्र तस्कर र भ्रष्टाचारीको हातमा छ : गृहमन्त्री बादल
फागुन,२७ काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले नेपाली अर्थतन्त्र अहिले पनि तस्कर र भ्रष्टाचारीको हातमा भएको बताएका छन् । मन्त्रालयमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री बादलले मुलुकको समृद्धि नै तस्कर र भ्रष्टाचारीहरुले हातमा लिएको बताएका हुन् । ‘अर्थतन्त्र तस्कर र भ्रष्टाचारीको हातमा छ,’ गृहमन्त्री बादलले भने, ‘भ्रष्टको सामाज्य छ, अब यसको अन्त्य गर्नु छ ।’ उद्योगी व्यवसायीहरुले ठूलो मात्रामा राजश्व छल्ने गरेको भन्दै मन्त्री बादलले त्यस्ता सूचना उपलब्ध गराउन पत्रकारलाई आग्रह गरेका थिए । अर्काे फरक प्रशंगमा गृहमन्त्री बादलले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका गतिविधिलाई राजनीतिक रुपमा समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले मुलुकमा विधिको शासन कायम गर्ने भन्दै कुनै पनि गलत कि्रयाकलाप र गतिविधिको अन्त्य गर्ने बताए । सुरक्षा संयन्त्र समेत अस्त व्यस्त भएको गृहमन्त्री